रासायनिक मलको विकल्पमा रुपमा ढैंचा मलको प्रयोग उपयुक्त – Krishionline
कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि हामीले प्रयोग गर्दै आईरहेको रासायनिक मलका कारण किसानहरुको खेतबारीको माटोमा अम्लियपन बढ्दै गईरहेको मात्रा होइन त्यसले उर्वराशक्तिमा समेत ह्रास ल्याएको छ ।
परम्पराग रुपमा प्रयोग गरिने गोवर मलले जति उत्पादन दिने गर्दथ्यो त्यो भन्दा बढी उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नाममा नेपालमा पनि रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग बढ्न थाल्यो । जसका कारण हाम्रा खेतबारीमा विस्तारै रोग कीरा बढ्ने र त्यसका विरुद्ध विषादी प्रयोग पनि बढाउन थालेको छौं ।
यस्तो परिस्थितिमा रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै प्रांगारिक कृषिमा जोड दिनु पर्ने बेला आएको छ । अवको प्रांगारिक खेतीका लागि ढैंचा मलको प्रयोग गर्ने हो भने कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा निकैै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिले धान उत्पादनका लागि तयारीकाे बेला छ । याे अवस्थामा धान लगाउने जमिनमा रासायनिक मलको आवश्यक मात्रा कटौती गर्न र माटोको उर्बराशक्ति बढाउदै धानको समेत उत्पादन बढाउन अहिले समय छदै ढैंचाको प्रयोग गरौँ ।
ढैंचा र यसको प्रयोग विधि निम्नानुसार रहेका छन् ।
के हो ढैंचा?
ढैंचा एउटा यस्तो बिरुवा हो जसमा हरियो पदार्थको परिमाण धेरै हुने भएकोले हरियो मलको रुपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो कोशेबाली अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको जराले नाईट्रोजनयुक्त तत्व सञ्चय गर्दछ । जसले गर्दा त्यसपछि लगाउने बालीलाई लाभदायक हुने गर्दछ । ढैंचाका करिब ५० देखि ६० प्रकारका विभिन्न प्रजाति मध्ये सेस्बानिया क्यानाबिना र सेस्बानिया रोस्ट्रटा हरियो मलका रुपमा बढी प्रचलित छन् ।
ढैंचाको जरामा गिर्खा हुने भएकाले नेपालमा यसलाई “गिर्खे ढैंचा” पनि भनेर चिन्ने गर्दछन् । तर सेस्बानिया रोस्ट्रटाको जरा तथा हांगाबिंगाहरुमा समेत गिर्खाहरु हुने भएकाले अरु ढैंचाको तुलनामा यो किसिमको ढैंचाको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दैछ ।
ढैंचाको प्रयोगले युरिया मलको मात्रालाई आधा घटाई धानको उत्पादन करिब २० देखी २५५ सम्म बढाउन मद्धत गर्दछ्र । ढैंचाको डांठ र हांगाहरु नरम हुन्छन । ढैंचालाई हरियो अबस्थामा माटोमा पल्टाई थोरै चिस्यान दिएमा सजिलै कुहिने र मलको काम गर्ने भएकाले हरियो मल भनिएको हो ।
ढैंचाको प्रयोग किन गर्ने ?
सेस्बानिया रोस्ट्रटा ढैंचाका गुणहरुः
(क) डांठ र हांगाहरुमा वायुमण्डलिय नाईट्रोजन स्थिरीकरण गर्न सक्ने राईजोविएम व्याक्टेरियाहरु भएका गिर्खाहरु पाईन्छन् ।
(ख) यो जातको ढैंचा सबै प्रकारको माटोमा लगाउन सकिन्छ ।
(ग) यस जातको ढैंचाले जमेको पानी र खडेरी दुबै वातावरण सजिलै खप्न सक्दछ ।
(घ) यसमा विभिन्न किसिमको पोषक तत्वहरु पाइन्छन (नाईट्रोजन ३.५५, फस्फोरस ०.६५ र पोटास १.२५) ।
(ङ) विभिन्न अनुसन्धानबाट ढैंचाले करिब ५० किलोग्राम नाईट्रोजनको बचत गराउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
(च) यस जातको ढैंचा खेतबारीमा लगाउदा कुनै प्रकारको मल नराखे पनि प्रति रोपनी वायुमण्डलिय नाईट्रोजन स्थिरीकरण गरी १३ किलो नाईट्रोजन (३० किलो युरिया बराबर) उपलव्ध गराउन सक्दछ ।
(छ) बीउ उत्पादन गर्न छुट्टै जग्गा नभए पनि खेतको डिलमा समेत लगाउँदा हुने र अरु जातको ढैंचा भन्दा दुई गुणा बढी बीउ उत्पादन हुन सक्दछ ।
(ज) बीउ राखेका बिरुवाहरुको डांठ आगो बाल्न, बारबन्देज गर्न, डोरी बनाउनको साथै यसका पातहरु गाईबस्तुको घाँसको लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।
कहिले र कसरी प्रयोग गर्ने?
ढैंचा धान लगाउने खेतमा चैत्र महिनाको शुरुवात देखि जेठ महिनाको अन्त सम्ममा लगाउन सकिन्छ । विशेष गरी गहुं बाली काटी सकेपछि र बर्षे धान रोपाई गर्ने बिचको खाली समय अबधिमा ढैंचा लगाई हरियो मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गहुँ काटी सकेपछि खेतलाई एकपटक जोतेर हल्का चिस्यान गराई प्रति कट्ठा एक केजीका दरले छर्नु पर्दछ । यसरी छरेको ढैंचालाई ५ देखि ६ हप्ता पछाडी अथवा फूल फुल्न भन्दा अगाडी यसको कलिलो बिरुवालाई खेतमा छिप्छिपे पानी सहित पल्टाई जोतेर माटोमा मिलाई दिनु पर्दछ ।
जसले गर्दा उक्त ढैंचा चांडै सढेर धानलाई हरियो मलको काम गर्दछ।यसरी जोतेर सढेको हरियो मलमा एक हप्ता पछाडी धान रोप्न सकिन्छ । ढैंचामा अरु तत्वको तुलनामा नाईट्रोजनको मात्रा बढी हुने भएकाले बिरुवालाई छिटो बढ्न मद्धत पुर्याउदछ ।
मानो रोपेर मुरी फलाउने अर्थात धान लगाउने समय नजिकिदैछ । हामीसंग भएको धान लगाउने जमिन बाँझो नराखौ । बरु अहिले नै समय छदै हरियो मलको रुपमा ढैंचाको प्रयोग गरी रासायनिक मलको आवश्यक मात्रा घटाई माटोको उर्बराशक्ति बढाउदै धानको समेत उत्पादन बढाऔं । शोभा खड्का :लेखिका खडका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, चितवनमा माटो विज्ञानमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन्
लकडाउनका कारण पुष्प व्यवसाय धरापमा, खेतमै सुके फूल भन्छन् कसजु